Ityhile iinkcukacha zokuqala zeSamsung yeNqaku leNqaku 8 | Iindaba zeGajethi
Ukuba kunyaka ophelileyo ekugqibeleni ubufuna ukuhlaziya inqaku lakho elidala, kulo nyaka konke okufuneka ukwenze kukulinda kuba, wakuba uqinisekisile ukuba inkampani yaseMzantsi Korea Isamsung yazisa i-Galaxy Note 8 entsha Kwaye sele esebenza kuyo ngokupheleleyo, ngoku iinkcukacha ezintsha malunga nesiphelo sendlela elandelayo zityhiliwe kuthi.
Olu lwazi luza kuthi luvela ku "ovuzayo" owaziwayo u-Evan Blass othe wasebenzisa ithuba lesithethi esikhulu esingumboniso wakhe ku-Twitter ukubhengeza ngendlela engacwangciswanga ukuba Inqaku le-Samsung le-8 leSamsung liza kufika kamva, ngo-Septemba, nakwixabiso elimalunga newaka lama-euro. Yima ngxi!, Njengoko watshoyo, "ungayi okwangoku, kusekho okungakumbi."
1 Ukutsiba kwiGalaxy Note 8
2 Oko sikwaziyo malunga neNqaku elilandelayo leGalaxy 8
Ukutsiba kwiGalaxy Note 8
Kunyaka ophelileyo, itekhnoloji enkulu ye-Samsung ithathe isigqibo sokutsiba inani leOlimpiki ngokusungula i-Galaxy Note 7 phakathi ehlotyeni.Kwaye kubonakala ngathi kufanele ukuba ifumene umfutho omkhulu kulonto yokutsiba kuba Ukungaphumeleli kwakukukhulu kwimbali.
Kungekudala emva kokumiliselwa kwayo kumazwe afana ne-United States kunye ne-South Korea, ilizwe labo, abanye abasebenzisi baqala ukuxela okungaqhelekanga amatyala okudubula kunye nemililo Esishiye isiphelo sendlela sigcwele amadangatye, senza intlanganisela yezinto, kwaye, ngamanye amaxesha, sichaphazele ezinye iipropathi: izithuthi, amakhaya ... ezintsha kwaye ngaphandle kweengxaki. Yenziwe kwaye yenziwa nangona kunjalo, kuyaziwa ukuba ukukhawuleza akulunganga kwaye kuthumelo lwesibini ingxaki iqhubekile. Abasemagunyeni basebenze kwaye i-Galaxy Note 7 yayinqatshelwe nakwiinqwelomoya ngenxa yomngcipheko wayo kukhuseleko loluntu. Ekugqibeleni, Isamsung yanyanzeliswa ukuba ikurhoxise ukwenziwa kwayo kunye nentengiso okwesihlandlo sesibini, ngoku, ngokusisigxina.
I-Samsung Galaxy Note 7 ibifile, kodwa hayi uthotho lweGalaxy Note. Kwelinye icala, ekuqaleni kwalo nyaka kwaqinisekiswa ukuba Isamsung izakwazisa ezinye iiyunithi "zihlaziyiwe" zeGalaxy Note 7 kumazwe afana noMzantsi Korea Ngexabiso eliphantsi malunga nama-25%, into leyo, ngendlela, iseza kwenzeka. Injongo ibiphindwe kabini: ukufaka igalelo kulondolozo lwendalo ngokukhupha izinto ebezigcinwe ngaphandle kokwazi kakuhle ukuba mabenze ntoni ngazo, kunye nokufumana inxenye yotyalo-mali olwenziwe kwisiphelo esisileleyo.
Ukusuka kwenye indawo, Isamsung yaqala ukusebenza kumlandeli wendalo kwisiphelo "sokuqhushumba", iGlass Qaphela 8,Esizazi ngoku ezinye iinkcukacha ezongezelelekileyo ngenxa yokuhluzwa okwenziwe ngu-Evan Blass ngeprofayile yakhe ye-Twitter @evleaks.
Oko sikwaziyo malunga neNqaku elilandelayo leGalaxy 8
Njengabasebenzisi abaninzi abasele becinga ukuba, i-Galaxy Note 8 elandelayo iya kudla ilifa ezinye zeempawu esele sizibona kwi-Galaxy S8 kunye ne-Galaxy S8 Plus. Eyona nto ibalulekileyo iya kuba kukwamkelwa kwembono yescreen "Ukubonisa okungapheliyo", enkulu Iphaneli ye-AMOLED egobileyo kumacala ayo anokuba nobukhulu be 6,3 intshi kunye no-18,5: 9 umlinganiso wezinto.
Nangona kunjalo, i-Galaxy Qaphela i-8 iya kuba, kude kube ngoku, i-terminal enesazisi sayo kwaye ke, ngaphandle kokufana kwayo kwi-S8 kunye ne-S8 Plus, iya kuzama nokuzikhwebula kubo, kwaye inganeli nje ngokudibanisa esele idumile. S Ipeni, kodwa nangokubalula okunje nge ezimbini zekhamera ene-12 megapixel sonors kunye nozinzo lwe-optical. Ecaleni kwabo kuya kubakho i-flash kunye nasekunene kwayo, inzwa yeminwe. Le iya kuba yindlela yokuphelisa "impikiswano" ebangelwa yindawo yokufunda iminwe ngeminwe kuthotho lwe-S8.
Ngaphakathi, siya kufumana i-terminal enamandla ngokwenene enentsebenzo entle kakhulu ngenxa yokuba iya kuyidibanisa Iiprosesa zeQualcomm Snapdragon 835 okanye iprosesa ye-Exynos 8895 (Kuxhomekeke kwintengiso esikuso), nangona Imemori ye-RAM iya kunyuswa iye kwi-6 GB. Kwaye konke oku kuxhaswe ngu I-3.300 mAh ibhetri.
Iya kubandakanya i umncedisi we-bixby kwaye ukumiliselwa kwayo kuya kwenzeka emva kwexesha kunokuba bekulindelekile, ngo-Septemba, ngeyona njongo iphambili yokuma kwimodeli entsha ye-iPhone, eya kuthi ikhutshwe ngaloo mihla, yiyo loo nto ixabiso layo liya kuba ngama-euro angama-999, yiyo loo nto ubanika ukubonakala okukhulu kwesixhobo seprimiyamu.
Ewe kunjalo, akukho nanye kwezi ezisemthethweni, nangona kunjalo, irekhodi lempumelelo likaBlass lisimema ukuba siluthathe ngokungaphezulu ulwazi lwakhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Ityhile iinkcukacha zokuqala ze-Samsung Galaxy Note 8